Titanium Aluminom Carbide, Aluminom Silicon Master Alloys - Xinglu
Ụwa dị ụkọ
Oxide Ụwa dị ụkọ
Nitrate Ụwa dị ụkọ
Ọla Ụwa dị ụkọ
Fluoride ụwa dị ụkọ
Ụwa Chloride dị ụkọ
Anyị na-akwado mgbe niile
Ihe dị elu, ndụ ka mma
Ugbu a, anyị na-ejikarị ihe ụwa na-adịghị ahụkebe, ihe nano, ihe OLED na ihe ndị ọzọ dị elu na-emekọ ihe.
Ụlọ ọrụ SHANGHAI XINGLU CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Shanghai Xinglu Chemical Technology Co., Ltd dị na etiti akụ na ụba-Shanghai.Anyị na-agbaso “ihe ndị dị elu, ndụ ka mma” na kọmitii na nyocha na mmepe teknụzụ, iji mee ka a na-eji ya na ndụ mmadụ kwa ụbọchị iji mee ka ndụ anyị ka mma.
Ugbu a, anyị na-eji ihe ndị na-adịghị ahụkebe eme ihe, ihe nano, nnukwu alloy na ihe ndị ọzọ dị elu.A na-eji ihe ndị a dị elu eme ihe na kemistri, ọgwụ, bayoloji, ihe ngosi OLED, ọkụ OLED, nchebe gburugburu ebe obibi, ike ọhụrụ, wdg.
Maka oge ugbu a, anyị nwere ụlọ mmepụta ihe abụọ na Shandong Province.Ọ na-ekpuchi ebe dị square mita 30,000, ma nwee ndị ọrụ karịa 100 mmadụ, nke mmadụ 10 n'ime ha bụ ndị injinia agadi.Anyị ehiwela ahịrị mmepụta dabara adaba maka nyocha, nnwale pilot, na mmepụta oke, ma guzobekwa ụlọ nyocha abụọ, yana otu ebe nnwale.Anyị na-anwale ọtụtụ ngwaahịa tupu nnyefe iji jide n'aka na anyị na-enye ndị ahịa anyị ngwaahịa dị mma.
Anyị na-anabata ndị ahịa si n'ụwa niile gaa na ụlọ ọrụ anyị ma guzobe ezigbo nkwado ọnụ!
site na ụlọ ahịa a
Họrọ ngwaahịa ị chọrọ
Anyị na-achọ mgbe niile ịnye ndị ahịa anyị otu nkwụsị ịzụrụ, yana ngwọta teknụzụ.
Silicon oxide / Silicon dioxide / S ...
Nano cerium oxide ntụ ntụ CeO2 nanopowder/nanopa...
Ọla kọpa Arsenic Master Alloy CuAs30
Aluminom boron Master alloy AlB8
99.9%, 99.95% Zirconium chloride ZrCl4 CAS Ọ dịghị 1...
99.9% -99.999% obere ụwa Cerium Oxide CeO2 nwere...
Nano Al2O3 aluminum oxide alumina ntụ ntụ
Nano silicon dioxide ntụ ntụ / Silica nanopowder ...
Magnesium mg ntụ ntụ
©Copyright 20102019 :Xinglu Chemical Niile echekwabara.
Ọ dịghị 1588, Lianhang Road, Minhang Dist, Shanghai, China
Ngwa nke nano cerium oxide na polymer
Ihe onwunwe dị ụkọ n'ụwa Magnesium dị ụkọ ...
Dị ka esemokwu dị n'etiti Ukraine na Russia ...
Ọdịnihu nke ihe ndị na-egwuputa ihe n'ụwa ...
Zụrụ (Ba) ọla Barium 99.9%